Izindaba - Izinzuzo nezinyathelo zokufaka imitha kagesi nge-transformer yamanje
Izinzuzo nokuqapha kokufaka imitha kagesi nge-transformer yamanje
Kungani imitha kufanele ifakwe i-transformer? Lokhu kwenzelwa ukugwema ukushisa imitha nokonga imali. Mayelana nokonga imali, intengo yemitha encane yamanje ene-transformer izoba ngaphansi kunaleyo yemitha enkulu yamanje. Ngokombono wokuphepha kwemitha kagesi, uma inani lamanje kulo lonke iluphu lidlula ibanga lokubekezelelana kwemitha, khona-ke Lizolimala. Ukuze ugweme ukushisa imitha, kuyadingeka ukufaka ikhwalithi enhle 11kv isiguquli samanje.
Izinyathelo zokuphepha zokufaka imitha kagesi zifaka izingxenye ezilandelayo:
1. Hlola ngaphambi kokufakwa
Hlola imitha ngaphambi kokuyifaka, ikakhulukazi ukuhlola ukuvela kwemitha. Qaphela lapho uhlola ukugwema ukuthenga imikhiqizo ephansi. Ngokuvamile, amamitha akhiqizwa abakhiqizi abajwayelekile azoba nophawu, ikakhulukazi qaphela leli phuzu, ukubona ukuthi uphawu luphelele yini, futhi lungafakwa kuphela ngemuva kokuphumelela esivivinyweni.
2. Indawo yokufaka
Imitha ayifakiwe ngokungahleliwe eduze komnyango wokungena. Inezidingo ezithile zemvelo ezungezile. Kungcono ukuyifaka endaweni engenalutho. Ngaphakathi kuka -40 degrees, umswakama awunakuba ngaphezu kuka-85%, ngasikhathi sinye awukwazi ukuvezwa yilanga, ukuphakama kugcinwa ku-1.8m.
3. Umsebenzi wokufaka
Lapho ufaka imitha, udinga ukuyifaka ngokuya ngomdwebo wiring, xhuma izintambo ezingenhla ngamunye ngamunye, isikulufa ngasinye kufanele silungiswe endaweni, udinga ukuhlola ngemuva kokufakwa, futhi ungakusebenzisa ngemuva kokuphasa isivivinyo.